Shiinaha warshad doofaarka gelatin iyo alaableyda | Gelken
Gelatin doofaarka, waxaa lagu sifeeyay inuu yahay cunno dabiici ah, oo ka kooban amino acids muhiim ah. Gelatin-doofaarkayagu waa borotiin gebi ahaanba la shiidi karo oo ku habboon cunnida aadanaha.
Qalabka ceeriin ee hilibka doofaarka gelatin wuu ka duwan yahay kan gelatin warshadaha. Gelatin doofaarka waxay u baahan tahay in lagu farsameeyo maqaar doofaarro cusub oo si adag u go'doonsan iyada oo aan wax daaweyn kiimiko ah lahayn. Waa mamnuuc in la isticmaalo qashinka wixii ka dambeeya maqaarka maqaarka, iyoGelatin doofaarka waa la qalajiyey oo lagu jajabiyay khadka wax soo saarka oo si buuxda u xiran.
Sababaha soo socda awgood, gelatin doofaarku wuxuu la kulmi karaa baahida suuqa ee sumadda nadiifinta
Waxay leedahay raad raac cad iyo daah-furnaan
2.Taageerada daryeelka xoolaha
3.Waxay gacan ka geysan kartaa qashinka eber iyo dhaqaalaha wareega
4. nabad galyo
6. Maya E-code
7.Waxay ku habboon tahay alaabada u baahan "summad dabiici ah"
Marka la fiiriyo jelkiisa gaarka ah iyo sifooyinka dhumucda, gelatin porcine waxaa si ballaaran u isticmaala soo saarayaasha cuntada iyo kuugga maqaayadaha. Dunida oo dhan, sidoo kale waxaa jira macaamiil badan oo guriga ku karsada gelatin.
Gelken porcine gelatin waxaa si ballaaran looga iibiyaa dalal badan, sida Thailand, Vietnam, South America iyo wixii la mid ah. Waxaan ka helnaa jawaab celin aad u wanaagsan macaamiisheena iyada oo aan wax cabasho ah iyo dib u soo celin.
Jalaatadeenna maqaarka doofaarka waxaa laga sameeyay maqaar cusub, oo ay ku hooseeyaan biro culus oo aan nadiif ahayn wasakhda, oo leh hufnaan sare, dhaxan sare iyo naftiis hooseeya. Waxaan ku takhasusay soo saarida gelatin maqaarka doofaarka leh waxyaabo kala duwan, kuwaas oo si ballaaran loogu soo bandhigay nacnaca, macmacaanka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, hilibka, alaabta ceeriin, cabitaannada, nafaqada iyo suuqyada caafimaadka.
Waxaan ku siin karnaa gelatin doofaarka laga bilaabo 80 illaa 280 ubax, iyo mesh of gelatin doofaarka waxaa laga heli karaa 8 ilaa 80 mesh
Sumadeena sumcadda gelatin ee sumcadda leh waxay ku siin kartaa saameyn aad u fiican oo baraf ah dhammaan kuugga cusub iyo kuwa wax kariya. Tani fudud ee la maareeyo oo si fudud loo isticmaalo gelatin waxay ku siin kartaa taxane taxane ah oo xalal ah adeegga cuntada.
Hore: Kosher Gelatin
Xiga: Gelatin 40 Mesh